China Vanity Nịm na Touch Screen Mirror Manufacturer na Supplier | Yifan
Efu Nwere na Touch Screen Mirror
Ihe nchekwa nchekwa abụọ na-enye ebe maka brushes, etemeete, moisturizers na ndị ọzọ.
Humanized mgbanaka ahụ imewe na-eme drawer mgba ọkụ mfe.
Isiokwu oge 800mmL x 400mmW x 750mmH
MDF ihe na-eme ka elu nke mgbakwasa table ezigbo na mfe ọcha. White tabletop jikọtara na ihe siri ike gold etiti anya nkecha na oge a, dị ka a dị mfe ma mara mma na ngwá ụlọ, zuru okè n'ihi na gị ime .Gold powder ntekwasa metal etiti nwere ike nchara na-eguzogide, onye kwụ Ogwe nkwado na ogwe abụọ kwụ ọtọ na ala nwere ike iwusi nkwụsi ike ahụ. Ọ bụ nhọrọ onyinye dị ukwuu maka nwa agbọghọ gị n’ụbọchị Valentine, ụbọchị nne na ụbọchị ọmụmụ.
Ọ mejupụtara ya na enyo iko LED gburugburu n'elu ka ị wee nwee ike ịhụperetụ nke ntụgharị uche gị, ọ ga-adịkwa mfe mgbe ị mejupụtara.Designed with screen touch dimming mirror, dresser na-enyere gị aka ime etemeete ọbụlagodi ọkụ adịghị mma. E nwere ụzọ ọkụ atọ nke okike, ọkụ na oyi maka gị ịhọrọ. The adụ ìhè ga n'ụzọ zuru okè tinye amara gị unit na ị ga na-eche na-egbuke. Dịka ejiri ya mee ihe P2, ihe na-eme ka ọ ghara ịrịa ọrịa ga-adị obere.
The efu set okokụre na pụtara ọlaedo, ọ na-aga nke ọma na-acha ọcha osisi table n'elu na akpụkpọ anụ upholstery. Ya nke sleek tapered ụkwụ na ọcha ahịrị, dịkọrọ ndụ na na akwa mgbakwasa bụ s nkecha adianade ọ bụla ime. Ihe ntaneti na-abaghị uru na-enye nchekwa bara uru ebe enyo dị gburugburu bụ ebe zuru oke iji mezuo ntutu gị na imepụta ya.
Enwere ike itinye tebụl a na-edozi ahụ n'ime ime ụlọ, ime ụlọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ, nke nwere ike ịnye ọmarịcha arịa ụlọ kachasị mma maka ụlọ gị.
YL:: Okomoko & Oge Mara Mma na ọgbara ọhụrụ
Ngwa: White + GoldMaterials: E1 ọkwa urughuru osisi + ntụ ntụ ntekwasa metal eku
Nke gara aga: Oak ụkwụ Makeup Isiokwu
Osote: YF-T3 jupụtara n'oge a uche mgbakwasa
YF-T6 nkecha na nke ọgbara ọhụrụ mgbakwasa
Obere ulo Mini mgbakwasa table
YF-T8 akụkụ jupụtara okomoko mgbakwasa okpokoro